बजारमा आउँदैछ आर्टिफिसियल किड्नी, थाहा पाउनुहोस् कसरी गर्छ काम ?
शुक्रबार, २३ भदौ, २०७४
एजेन्सी । विज्ञानले पछिल्लो समय निकै ठुलो विकास गरिसकेको छ । दिनहुँ नयाँ कुराहरु बाहिर आइनै रहेका छन् । नयाँनयाँ अनुसन्धानका कारण मानिसहरु विभिन्न विकल्पबारे थाहा पाउन थालेको छन् भने कतिपय प्रयोगमा पनि आइसकेका छन् ।
किड्नीका विरामीहरुलाई खुशीको खबर । जो क्रोनिक डिजीजको सामना गरिरहेका छन् जसलाई डाइलोसिसको माध्यमबाट जीवित राखिएको छ उनीहरुलाई छिट्टै नै बजारमा आर्टिफिशियल किड्नी आउँदैछ ।
सेफ्टी र क्वालिटीको परिक्षण भइरहेको छ ।
एडीएको स्विकृति पाउनुपुर्व आर्टिफिशियल किड्नी अमेरिकामा १०० जनामा गुणस्तर र सुरक्षा परिक्षण गरिएको थियो । आर्टिफिशियल किड्नी डिभाइसको को–इन्वेन्टर क्यालिफोर्निया सन फ्रान्सिसकोको शोधककर्ता डा. शुवो राय हुन् ।
कसरी काम गर्छ यो किड्नीले
आटिफिसियल किड्नी डिवाइसको एबडमनमा इम्प्लान्ट गरिन्छ र मुटुको मदतले सञ्चालन गरिन्छ । यस डिभाइस यसरी निर्माण गरिएको छ कि यो ब्लडलाई फिल्टर गर्छ र किड्नीको बाँकी काम पनि सुचारु रुपमा गर्छ । आटिफिशिल किड्नीका रुपमा हर्मोन्स उत्पादनमा पनि मदत मिल्छ र ब्लड प्रेशर पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । यो वास्तविक किड्नीको रुपमा काम गर्छ ।
कतिखेर हुन्छ किड्नी ट्रान्सप्लान्ट
क्रोनिक किड्नी डिजिज फाइनल स्ेटजमा रहेको अवस्थामा जब किड्नीबाट फ्लुड निकाल्न र अन्य काम गर्न असमर्थ हुन्छ ।
यस्तो समयमा विरामीको किड्नी रिप्लेसमेन्टको लागि डायलिससमा राखिन्छ ।
किड्नी ट्रान्स प्लान्ट एउटा सर्जिकल प्रक्रिया हो । यसमा एउटा स्वस्थ किड्नी लगाउने गरिन्छ । जसको किड्नी ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न छोडेको छ उसलाई ट्रान्स प्लान्ट गर्न आवश्यक पर्छ । हेल्दी किड्नी कुनै मृतक व्यक्ति वा कोही जीवित मानिसले पनि गर्न सक्छ ।